Nin Ingiriis ah oo Caalamka ka Codsaday in la Aqoonsado Somaliland | Somaliland.Org
Nin Ingiriis ah oo Caalamka ka Codsaday in la Aqoonsado Somaliland
January 8, 2013	Hargeysa (Somaliland.Org)- Muwaadin u dhashey Dalka Ingiriiska oo la yidhaahdo Brit Christopher, xilligana ku sugan caasimada Hargeysa ayaa beesha caalamka ka codsaday inay tixgaliso qaddiyadda ictiraafka ee Somaliland, islamrkaana ay siiso aqoonsiga oo ah mid ay muteysteen.
Waxa uu sheegay inuu soo maray in ka badan 15 dal oo ay ka mid yihiin Kenya, Jabuuti, Ethiopia, Suudaan, iyo waliba dalal kale oo ka tirsan qaaradda Afrika.
Mr Brit Christopher oo si mutadawacnimo ah xilligan uga hawlagala dhakhtarka Edna Maternity Hospital, waxaa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay waxa uu ku arkay Soomaaliland.
Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa uu yidhi “Waxaan ku faraxsanahay joogitaankayga Soomaaliland oo aan uga soo kicitimay London kana hawlgalo dhakhtarkani Edna Hospital, dimuquraadiyadda iyo nidaamka ay samaysteen waa waxaan ka jirin dalal badan oo dunida amaba qaarada Afrika.
Waxaan beesha caalamka u soo jeedinayaa inay aqoonsato Soomaaliland laguna tixgaliyo waxaa ay qabsadeen.”
“Dhinaca kale, U qaybsanaha mucaawinooyinka Qaramada Midoobey ee Soomaaliland Mark Bowden ayaa muwaadinkani reer London ku bogaadiyay safarkiisan uu ku joogo Soomaaliland isagoo ku hambalyeey kaalinta waxqabad ee uu ka wado Somaliland gaar ahaan hawlgalkiisa dhinaca caafimaadka ee dhakhaatiirta. Brit Christopher, ayaa ah muwaadin dhalinyaro ah oo safar ku soo marey 15 dal oo ka mid ah caalamka iyo qaaradda Afrika.
Isagoo ka soo kicitimay magaalada London ee (England) isagoo si mutadawacnimo oo caafimaadka ka fuliyay dalal geeska oo ay ku jirto Soomaaliland oo xilligani uu ku sugan yahay. Cumar Maxamed Faarax
Previous PostWasiirka Dibu-dejinta oo soo bandhigay qorsheyaasha WasaaraddiisaNext PostG/Africa oo Somaliland oo keliya lagu casumay Shir laga hadlaayo horumarinta Tamarta	Blog